You are here: Home / Shuruudaha Adeegyada
Shuruudaha iyo shuruudaha soo socda waxay isticmaalaan dhammaanba isticmaalka shabakadda Planet Fixer Digest iyo dhammaan maadooyinka, adeegyada iyo alaabada la heli karo ama la marayo website-ka (oo la isu geeyay, Website). Websiteka waxaa iska leh oo ay maamusho "The Planet Fixer Digest" ("Planet Fixer Digest"). Websaydhka waxaa la siiyaa maaddada ogolaanshahaaga iyadoon wax laga bedelin dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha ku xusan iyo sharciyada kale ee qawaaniinta, siyaasadaha (oo ay ku jiraan, aan xadidneyn, Qorshaha Xogta Khaaska ah ee Qorshaha Fikradaha Fikradda ah) iyo hababka loo daabici karo waqti ka waqti boggaan waxaa soo saaray Qorshaha Fikradaha Fiktooriya (wadajirka, "Heshiiska").
Fadlan si taxadar leh u akhri Heshiiskan kahor intaanad isticmaalin ama isticmaalin Websiteka. Adigoo galaya ama isticmaalaya qayb ka mid ah bogga internetka, waxaad ku raacsan tahay inaad ku xidhantahay shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan. Haddii aadan ku raacsanayn dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan, ka dibna ma heli kartid Websaydh ama adeegso adeeg kasta. Haddii shuruudaha iyo shuruudahaas loo tixgelinayo dalab ay soo saareen Qorshaha Fikradaha Fiktooriya, aqbaliddu waxay si kooban u xaddidan tahay shuruudahan. Websiteka waxaa la heli karaa oo keliya shakhsiyaadka ugu yaraan 13 da'da ah.
Your Your Planet Fixer Digest Account iyo Site. Haddii aad abuurto barta internetka, waxaad masuul ka tahay ilaalinta amniga koontadaada iyo blogga, adiguna waxaad si buuxda mas'uul uga tahay dhamaan waxqabadyada ka dhacaya koontada iyo waxqabadyada kale ee la xiriira barta. Waa inaadan sharaxin ama ha ku qorin ereyada muhiimka ah ee ku jira bartaada si habaabisid ama sharci darro ah, oo ay ku jirto habka loogu tala galay in lagu ganacsado magaca ama sumcadda kuwa kale, iyo Qorshaha Fikradda Fixinta Digirsan ayaa laga yaabaa inay bedesho ama tirtirto wixii sharaxaad ah ama erayga muhiimka ah ee ay u aragto mid aan habooneyn ama sharci-darro, ama haddii kale ay u badan tahay inay sababaan Mas'uuliyadda Qorshaha Fikradda Fikradaha. Waa inaad isla markiiba u sheegtaa Qorshaha Fikradaha Fikradaha ee wax kasta oo aan loo fasirin ee boggaaga, xisaabtaada ama xadgudubyada kale ee amniga. Qorshaha Fiktoorka Fiktoorka looma ciqaabi doono waxqabadyo ama wax ka gaabin adiga, oo ay ku jiraan wax kasta oo khasaare ah oo nooc kasta ah oo loo geysto falalka noocaas ah.
Mas'uuliyadda Ka-qayb-galayaasha. Haddii aad ku shaqeysid blog, waxaad ka faalloon kartaa bogga, barta boostada ee bogga, boggaga internetka, ama si kale u samee (ama u ogolow cid kasta oo saddexaad in ay sameyso) alaabta ay ku heli karto iyada oo loo marayo Websaytka (wax walbo ah, "Content" ), Waxaad si buuxda masuul uga tahay mawduuca, iyo waxyeelo kasta oo keeneysa, in Mawduuca. Taasina waa iyada oo aan loo eegeynin Mawduuca su'aasha ah ee ka dhigan qoraalka, garaafyada, faylka codka, ama software kombuyuutar. Markaad sameysid content waxaad heli kartaa, oo waxaad ku amreysaa:
soo-dejinta, koobi-gelinta iyo isticmaalka Mabaadi'inta kuma xad-gudbi doonto xuquuqda macaamiisha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xuquuqda daabacaadda, patentka, calaamadaha ganacsiga ama ganacsiga qarsoodiga ah, mid kasta oo saddexaad;
haddii loo-shaqeeyahaagu xaq u leeyahay hantida cilmiga leh ee aad sameysey, waxaad leedahay (i) aad ka heshay ruqsadda loo-shaqeeyahaaga si aad ugu dirto ama u diyaariso Maqalka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn barnaamijyada, ama (ii) dhammaan xuquuqaha ku jira ama ujeeddada;
waxaad si buuxda u hogaansantay ruqsad kasta oo saddexaad oo la xidhiidha Mawduuca, oo ay sameeyeen dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inay ku guulaystaan ​​illaa dhamaadka isticmaalaha shuruudaha looga baahan yahay;
Macluumaadka kuma koobna ama rakibo fayruusyada, dirxiga, gardarrada, fardaha fardaha ama waxyeello kale oo waxyeelo leh ama waxyeelo leh;
content ma aha spam, ma aha mishiinka-ama si aan kala sooc lahayn, oo aan ku jirin waxyaabo aan caqli-gal ahayn ama aan loo baahnayn ganacsi oo loogu talagalay in lagu wado gawaarida goobaha sadexaad ama kor u qaadida qiimeynta mashiinka raadinta ee goobaha saddexaad, ama ficillo kale oo sharci-darro ah (sida sida phishing) ama dadka qaata marin habaabinta sida ilaha maaddada (sida qashin-qubka);
Mabda'u maaha pornographic, kuma jiraan hanjabaad ama dhiirigelinta rabshadaha xagga shakhsiyaadka ama hay'adaha, oo aan ku xad gudbin xuquuqda asturnaanta ama xuquuqda daabacaadda ee cid kasta oo saddexaad;
blog-kaaga aan lagu soo bandhigin farriimo elektaroonik ah oo aan loo baahneyn sida xidhiidhada spam ee kooxaha wargeysyada, liiska emailada, blogyada kale iyo goobaha internetka, iyo qaababka la midka ah ee wax-soo-saarka ah;
bloggaaga laguma magacaabin hab wax u tarjumaya akhristayaashaada inaad ku fikirto inaad tahay qof kale ama shirkad. Tusaale ahaan, URL-kaaga ama magacaaga blogka ma aha magaca qof aan ka ahayn naftaada ama shirkad aan ahayn adiga keligaa; iyo
waxaad haysataa, marka la eego Xeerka oo ay ku jiraan lambarka kombiyuutarka, si sax ah loo cayimay iyo / ama lagu sharaxay nooca, dabeecada, isticmaalka iyo saameynta alaabta, haddii loo codsaday in ay sidaas sameeyaan by Planet Fixer Digest ama haddii kale.
Adigoo soo gudbinaya Mawduuca Qorshaha Fikradda Fixinta ee loogu talogalay in lagu daro boggaaga, waxaad siinaysaa Qorshaha Fikradaha Qoraalku wuxuu soo saari doonaa ruqsadda qorshaha caalamiga ah, royalty-free, iyo ruqsadda aan layska reebin ee soo saaridda, wax ka beddelka, la qabsashada iyo daabacaadda Mawduuca oo keliya ujeedada muujinta , qaybinta iyo dhiirigelinta bartaada. Haddii aad tirtirto Mawduuca, Qorshaha Fikradaha Fixinta ayaa isticmaali doona dadaal macquul ah oo looga soo saaro Website-ka, laakiin waad qiraysaa in qadiyeynta ama tixraacyada Mawduuca aan la sameyn karin isla markiiba.
Xaddidaadda mid ka mid ah matalaadyada ama damaanada, Qorshaha Fiktoorka Fixinta wuxuu xaq u leeyahay (inkastoo aan waajibka ahayn), Qorshaha Fikradda Fixinta Digicga ee Kalifo-siinta (i) diidmada ama ka saaro wax kasta oo ku jira, ee Qorshaha Fiktoorka Fiktoorka ee fikrad macquul ah, wax kasta oo ah Qorshaha Fikradda Fikradaha Digista ama si kasta oo waxyeello leh ama loola dhaqmi karo, ama (ii) joojin ama diidi karo helitaanka iyo isticmaalka Website-ka qof kasta ama shaqsi kasta sabab kasta ha ahaato, Qorshaha Fiktoorka Fixinta Digest. Qorshaha Fikradaha Fiktoorka ma laha waajibaad ah in uu bixiyo lacag celin lacageed oo horay loo bixiyay.
Adiga oo dooranaya badeeco ama adeeg, waxaad ogolaatay inaad bixiso Qorshaha Fiktooraha Munaasab ah hal mar iyo / ama bil kasta ama sicirrada liisaska liiska lagu muujiyay (shuruudaha dheeraadka ah ee lacag bixinta waxaa lagu dari karaa isgaarsiinta kale). Bixinta lacag-bixinta waxaa lagu soo oogi doonaa saldhig bilaash ah maalinta aad u-qorto Dib-u-hagaajinta waxayna dabooli doontaa isticmaalka adeegyadaas marxaladda bil kasta ama bilaha ah sida ku cad. Lacagaha lama soo celin karo.
Haddii aadan u sheegin Qorshaha Fikradda Fikradaha ka hor dhamaadka muddada rukunka ee aad rabto inaad iska joojiso qandaraas-siinta, macaamiishaada ayaa si toos ah u cusbooneysiin doonta, waxaadna noo ogolaaneysaa inaad soo qaadato khidmadda sannadlaha ah ee bilaashka ah ama bil kasta ee loogu talagalay rukunka (sidoo kale canshuur kasta) adigoo isticmaalaya kaararka deynta ama habka lacag bixinta ee kale ee aanu ku hayno diiwaanka adiga. Dayactirka waa la joojin karaa wakhti kasta adigoo codsi u gudbinaya Qorshaha Fikradda Qorshaha si qoraal ah.
Khidmadaha; Bixinta. Marka aad saxiixdo koontada Adeegyada waxaad ogolaatay inaad bixiso Qorshaha Fikradda ah ee Dareemaha Khariidadda khidmadaha dejinta kharashka iyo kharashka soo noqnoqda. Lacagaha la dabaqi karo ayaa laga soo jarayaa laga bilaabo maalinta aad adeegsanayso iyo horey u isticmaalida adeegyadan. Qorshaha Fikradaha Fiktooriya wuxuu kaydiyaa xuquuqda lagu beddeli karo shuruudaha lacag bixinta iyo khidmadaha ku baxaya soddon (30) maalmood kahor ogeysiis qoran. Adeegyada waa lagaa joojin karaa adigoonba soddon (30) maalmood ogaysiis qoraal ah oo loo yaqaan "Planet Fixer Digest".
Support. Haddii adeeggaaga uu ku jiro helitaanka taageerada emailka mudnaanta leh. "Taageerada emailka" macnaheedu waa awooda codsiyada taageero farsameed by email mar kasta (dadaal macquul ah by Planet Fixer Digest si looga jawaabo hal maalin ganacsi) ku saabsan isticmaalka adeegyada VIP. "Mudnaanta" macnaheedu waa taageero ayaa mudnaanta siinaysa taageerada dadka isticmaala cabirka ama bilaashka ah Adeegyada Qorshaha Fikradaha Fiktooriya. Dhammaan masruufka waxaa la siin doonaa si waafaqsan qorshaha adeegga caadiga ah ee loo yaqaan 'Planet Fixer Digest', nidaamyada iyo siyaasadaha.
Mas'uuliyadda booqdayaasha Website. The Planet Fixer Digest ayaan dib u eegin, mana dib u eegi karin, dhammaan waxyaabaha, oo ay ku jiraan software kombiyuutar, lagu dhejiyo Website-ka, sidaas darteed ma noqon karo masuuliyad ka saaran content-ka, isticmaalka ama saameynta. Iyadoo la adeegsanayo Website-ka, Planet Fixer Digest ma matalayo ama micnaheedu yahay in ay ku kalsoonyahay maaddada ay ku dhajisay, ama in ay aaminsan tahay in qalabkaasi uu noqdo mid sax ah, faa'iido leh ama aan waxyeello lahayn. Adiga ayaa mas'uul ka ah qaadista taxadaraad sida ugu muhimsan si aad u ilaaliso naftaada iyo nidaamka kombiyuutarka fayraska, dirxiga, fardaha xamuulka, iyo waxyaabo kale oo waxyeelo leh ama waxyeelo leh. Websaydhku wuxuu ku jiri karaa nuxur ka soo horjeeda, khaldan, ama wax kale oo aan la diideyn, iyo waliba waxyaabaha ay ka kooban yihiin farsamooyinka farsamada, khaladaadka caanka ah, iyo qaladaadka kale. Websaydhku wuxuu kaloo ku jiri karaa waxyaabo ku xad gudbaya xuquuqda gaarka ah ama xuquuqda daabacaadda, ama ku xad-gudubta xuquuqda macaamiisha iyo xuquuqda kale ee macaamiisha, qaybaha saddexaad, ama soo dejinta, koobi ama isticmaalka kuwaas oo ku xiran shuruudo dheeraad ah iyo shuruudo, ama lagu xakameeyay. The Planet Fixer Digest ayaa beeninaysa wixii masuuliyad ah ee waxyeello kasta oo ay keenayso isticmaalka dadka booqanaya Website-ka, ama wixii soo-celin ah oo ay soo booqdaan kuwa soo-galayaasha ah ee halkaa ku qoran.
Mawduucyada Lagu soo saaro Websaydh kale. Anagu dib uma eegin, mana dib u eegi karno, dhammaan waxyaabaha, oo ay ka mid yihiin software kombuyuutar, oo laga helo boggaga internetka iyo bogagga loo yaqaan "The Planet Fixer Digest links," iyo "Linket Fixer Digest". The Planet Fixer Digest ma laha wax kantarool ah kuwa aan ahayn Qorayaasha Fixer Fixer Digest iyo websaytka, mana ka masuul ah waxyaabaha ay ka kooban ama isticmaalkooda. Iyadoo lala xiriirinayo shabakad aan ahayn Qorshaha Fikradaha Fixinta Digfeerka ama websaydhka, Qorshaha Fikradaha Fiktooriya maaha mid wakiil ka ah ama muujinaya in ay taageereyso boggaan ama bogga internetka. Adiga ayaa mas'uul ka ah qaadista taxadaraad sida ugu muhimsan si aad u ilaaliso naftaada iyo nidaamka kombiyuutarka fayraska, dirxiga, fardaha xamuulka, iyo waxyaabo kale oo waxyeelo leh ama waxyeelo leh. The Planet Fixer Digest ayaa beeninaya mas'uuliyad kasta oo waxyeello ah oo ka timid isticmaalkaaga aan ahayn Qorshaha Fikradaha Fiktoorka Digirta iyo websaytka.
Xad-gudubka Sharciga iyo Siyaasadda DMCA. Sida Qorshaha Fikradaha Fiktoorka wuxuu ka codsanayaa dadka kale inay ixtiraamaan xuquuqdooda macaamiisha fikrada, waxay ixtiraamtaa xuquuqda aqooneed ee dadka kale. Haddii aad aaminsantahay in alaabada ku taal ama ku xiran tahay Qorshaha Fikradaha Fiktoorka ku xadgudbay xuquuqdaada, waxaa lagugu dhiirrigelinayaa inaad ku wargeliso Qorshaha Fikradaha Fikradaha si waafaqsan Qorshaha Fikradaha Fiktooriya ee Diiwaangelinta Xeerka Xeerka Xeerka Muuqaalka ("DMCA"). The Planet Fixer Digest ayaa ka jawaabi doona dhammaan ogeysiisyadaas oo dhan, oo ay ku jiraan sida loo baahan yahay ama ku habboon adigoo ka saaraaya waxyaabaha jaban ama naafanaya dhammaan xiriirinta qalabka foosha. The Planet Fixer Digest wuxuu joojin doonaa booqdaha booqdaha iyo isticmaalka Websiteka haddii, xaaladaha ku haboon, booqdeheeda ayaa lagu go'aamiyey inay noqoto xadgudub ku celis ah xuquuqda daabacaada ama xuquuqda kale ee macaamiisha fikrada ah ee "Planet Fixer Digest" ama kuwa kale. Marka laga hadlayo joojinta noocan ah, Qorshaha Fikradaha Fiktoorka qasab maaha inay bixiso lacag celin lacageed oo horay loo siiyay Qorshaha Fikradaha Fikradaha.
Hantida aqooneed. Heshiiskani kama wareejinayo Qorshaha Fikradaha Qorshaha ee Qorshaha Fiktoorka Digirta ama qaybta saddexaad ee macaamiisha, iyo dhamaan xuquuqda, astaanta iyo xiisaha iyo hantidaas ayaa sii ahaan doona (sida dhinacyada) oo keliya oo leh Qorshaha Fikradaha Fikradaha. Qorshaha Fikradaha Fixinta, Qorshaha Fikradaha Fixinta, Qorshaha Fikradaha Fixer Digest, iyo dhammaan calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeega, garaafyada iyo calaamadaha loo isticmaalo la xidhiidha Qorshaha Fiktoorka Digfeerka, ama Websaytku waa calaamadaha ganacsiga ama calaamadaha diiwaangashan ee Qorshaha Fiktoorka Digirta ama Shati bixiyeyaasha Qorshaha Fikradaha Fixer Digest. Calaamadaha kale, calaamadaha adeega, sawirada iyo logos ee loo isticmaalo Website-ka waxay noqon karaan calaamadaha ganacsiga ee dhinacyada kale. Isticmaalkaaga internetka ayaa ku siinaya xuquuq ama liisan si aad u soo saarto ama u isticmaasho mid kasta oo ka mid ah Qorshaha Fikradaha Fiktooriya ama qaybta saddexaad.
Xayeysiisyada. The Planet Fixer Digest ayaa kaydiya xuquuqda ah in lagu muujiyo xayaysiiska blog-kaaga haddii aadan iibsan koontada aan-lacag-la'aanta aheyn.
Iskudarid. The Planet Fixer Digest wuxuu kaydiyaa xuquuqda aad ku muujinayso isku xirka xiriirka sida 'Blog at The Planet Fixer Digest,' qoraalka mawduuca, iyo astaanta qoraalka ee boggaaga ama boggaaga.
Waxyaabaha Iskaashiga ah Iyada oo la hawlgelinayo badeecad wadaag ah (sida mawduuc) mid ka mid ah shurakadayada, waxaad ku raacsan tahay shuruudaha adeegaha. Waad joojin kartaa shuruudaha adeegga wakhti kasta adigoo u-furfuraya sheyga lamaanaha.
Domain Names. Haddii aad iska diiwaangeliso magac domain, isticmaalida ama ku wareejinta magaca domainka hore ee diiwaansan, waxaad qiraysaa iyo ogolaatay in isticmaalka magac domain ay sidoo kale u hoggaansamaan siyaasadaha shirkada Internetka ee Magacyada iyo Tilmaamaha ("ICANN"), oo ay ku jiraan Xuquuqda Diiwaangelinta iyo Waajibaadka.
Isbedelada. Qorshaha Fikradaha Fiktooriya wuxuu xaq u leeyahay, iyada oo ujeedadiisu tahay, inuu beddelo ama beddelo qayb ka mid ah Heshiiskan. Waa masuuliyadaada inaad hubiso Heshiiskaan si joogto ah isbeddellada. Isticmaalkaada sii socota ama galitaanka Website ka dib marka la soo diro isbeddel kasta ee Heshiiskaan waxay ka dhigan tahay aqbalaadda isbedeladaas. Qorshaha Fiktoorka Fixerka ayaa sidoo kale, mustaqbalka, siin kara adeegyo cusub iyo / ama muuqaalada iyada oo loo marayo Websiteka (oo ay ku jiraan, sii deynta qalabka cusub iyo ilaha). Tilmaamaha cusub iyo / ama adeegyada waa inay ku xiran yihiin shuruudaha iyo shuruudaha Heshiiskan.
Joojinta. Qorshaha Fikradaha Fiktoorku wuxuu joojin karaa helitaankaaga ama qayb kasta oo ka mid ah Websiteka wakhti kasta, ama sabab la'aan, ama ogeysiis la'aan, wax ku ool ah markiiba. Haddii aad rabto inaad joojiso Heshiiskan ama xisaabta Qorshaha Fikradaha Fikradda (haddii aad mid leedahay), waxaad si fudud u joojin kartaa isticmaalka Website-ka. Hase yeeshe, haddii aad haysato xisaabin adeegyo lacag ah, koontadani waxaa kaliya oo ay joojin kartaa Qorshaha Fikradda Qorshaha haddii aad si khalad ah u jebiso Heshiiskan oo aad ku guuldareysato inaad ku xadgudubto noocan oo kale soddon (30) maalmood gudahood laga bilaabo Qorshaha Fiktoor Fixer Digest ' ; taas oo ah, Qorshaha Fikradaha Fiktoorku wuxuu joojin karaa Websiteka isla markiiba iyadoo qayb ka ah guud ahaan xiridda adeegeena. Dhamaan qodobbada Heshiiskan oo dabeecaddoodu ay tahay in ay ka baxdo joojinta waa inay ka baxdaa joojinta, oo ay ku jirto, iyada oo aan xaddidnayn, shuruudaha lahaanshaha, shuruudaha damaanad qaadka, magdhawga iyo xaddidaadda mas'uuliyadda.
Diidmada Warqadaha. Websiteka waxaa la bixiyaa "sida". The Planet Fixer Digest iyo alaab-qeybiyeyaashiisa iyo shati-bixiyeyaashu waxay halkan ka tirtirayaan dhammaan damaanad-qaadyada nooc kasta ah, muujinaya ama qeexaya, oo ay ka mid yihiin, iyada oo aan xadidnayn, damaanad qaadka ganacsiga, ujirta ujeeddo gaar ah iyo aan jebin. Midkoodna Planet Fixer Digest ama alaab-qeybiyeyaashiisa iyo shati-bixiyeyaasha, waxay sameeyaan wax damaanad ah in Websaydku khalad u yahay ama u-helitaankeeduna noqon doono mid joogto ah ama aan kala go 'lahayn. Waxaad fahamsan tahay in aad ka soo dejisan tahay, ama haddii kale aad ka heshid maadooyin ama adeegyo iyada oo loo marayo, Websaytka adiga oo ka fekeraya adiga iyo khatartaada.
Xaddidaadda Mas'uuliyadda. Munaasabadda dhacdooyinka Shirkadda Qorshaha Fiktooriya, ama alaab-qeybiyeyaasheeda ama shati-bixiyeyaashu, waxay masuul ka yihiin mawduuc kasta ee heshiiskan ku jira qandaraas kasta, dayacaad, masuuliyad adag ama sharci kale oo sharci ama siman: (i) wax kasta oo khaas ah, waxyeelada soo gaartay; (ii) kharashka soo iibsiga alaabada ama adeegga bedelka; (iii) joojinta isticmaalka ama lumitaanka ama musuqmaasuqa xogta; ama (iv) qadar kasta oo ka sarreeya khidmooyinka aad ku bixisay Qorshaha Fikradda Fikradaha ee ku qeexan heshiiskaan inta lagu jiro laba iyo tobanka bilood (12) muddada bilowga ficilka. Qorshaha Fikradaha Fiktooriya ma lahan wax masuul ka ah wixii kufilmaamid ama dib u dhac ku yimaado arrimo ka baxsan xakamayntooda macquul ah. Qodobada kor ku xusani ma khusayso ilaa inta ay ka mamnuuceyso sharciga la dabaqayo.
Wakiil Guud iyo Gargaar. Waxaad adigu wakiil ka tahay oo waxaad ku amri kartaa (i) isticmaalkaaga Website inuu si adag ugu tiirsan yahay Qorshaha Xogta Qarsoodiga ah ee Qorshaha Qorshaha, Qorshahan iyo dhammaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya (oo ay ku jiraan aan xadidneyn shuruucda maxaliga ah ama xeerarka wadankaaga, gobolka, magaalo, ama aag kale oo dawladeed, ku saabsan habdhaqanka internetka iyo waxyaabaha la aqbali karo, oo ay ku jiraan dhammaan sharciyada khuseeya gudbinta macluumaadka farsamo ee laga dhoofiyo Maraykanka ama wadanka aad ku nooshahay) iyo (ii) isticmaalkaaga Website ma xadgubin ama ha u isticmaalin xuquuqda lahaanshaha ee fikrada ah ee dhinac saddexaad.
Magdhawga. Waxaad ogolaatay in aad magdhowto oo aad qabsato waxyeelada Qorshaha Fikradaha Fixinta, qandaraaslayaasheeda, iyo shatiyeyaashooda, iyo agaasimayaashooda, saraakiisha, shaqaalaha iyo wakiilada ka soo horjeeda iyo wixii ka dhan iyo sheegashooyinka iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka, ka soo baxa isticmaalkaaga Websiteka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn xad-gudubyada Heshiiskaan.
Waxyaabo kala duwan. Heshiiskani wuxuu ka dhigan yahay dhammaan heshiiskii u dhexeeya Planet Fixer Digest iyo adiga oo ku saabsan mawduuca mawduuca, waxaana laga yaabaa in la badalayo oo kaliya wax-ka-beddel qoraal ah oo saxiixay fuliye sharci ah oo loo yaqaan "Planet Fixer Digest", ama soo gudbinta Qorshaha Fikradda Fixinta dib loo eegay. Marka laga reebo illaa heerka sharciga ah, haddii ay jirto, waxay si kale u bixisaa, Heshiiskan, helitaanka ama isticmaalka Websiteka waxaa lagu xukumi doonaa sharciyada Provincia de San Jose, marka laga reebo khilaafaadka sharciga ee sharciga, iyo goobaha habboon ee wax khilaafaadka soo baxaya ama la xidhiidha mid kasta oo isku mid ah waxay noqon doonaan maxkamadaha gobolka iyo federaalka ee ku yaal San Jose, San Jose. Marka laga reebo sheegashada magangelyo ama caddaalad ah ama dalabaad ku saabsan xuquuqda lahaanshaha fikradaha (oo laga yaabo in loo keeno maxkamad awood leh iyada oo aan la soo dirin dammaanad), khilaaf kasta oo ka soo baxa Heshiiskaan waa in ugu dambeyntii la xaliyaa iyada oo la raacayo Xeerarka Xalinta Khilaafaadka Adeegga Xalinta Xalinta Khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta, Inc. ("JAMS") saddex sarkaal oo loo magacaabay sida waafaqsan Xeerarkan. Heshiisiintu waa inay ka dhacdaa San Jose, luuqada Ingiriisiga iyo go'aanka garqaadaha waxaa lagu fulin karaa maxkamad kasta. Xisbigii ku guuleystay ee ficil kasta ama hirgelinta Heshiiskan wuxuu xaq u yeelanayaa kharashka iyo khidmadaha qareenka. Haddii qayb ka mid ah Heshiiskaan la hirgeliyo ama aan la awoodin, qaybtaas waxaa loo fidin doonaa inay ka turjumayso dhinacyada asaasiga ah, iyo qaybaha soo haray waxay ku sii jiri doonaan awood buuxda iyo saameyn. Ka dhaafid mid ka mid ah labada koox ee marxalad kasta ama shuruuda Heshiiskan ama jebin kasta, mid kasta oo ka mid ah, mid ka mid ah, ma waayi doono muddada ama xaaladdan ama wixii jebin ah ee ku xiga. Waxaad ku wareejin kartaa xuquuqdaada Heshiiskaan koox kasta oo ogolaato, oo ogolaato in lagu xiro shuruudaha iyo shuruudaha; The Planet Fixer Digest ayaa u xilsaaran kara xuquuqdiisa sida ku cad Heshiiskan iyadoon wax shuruud ah lahayn. Heshiiskani wuxuu noqonayaa mid ku habboon oo u gudbi doona faa'iidada dhinacyada, guurtida iyo udoodaha loo oggol yahay.
Rev. MICHAEL KEVIN ayaa sheegay in
ایا تاسو د 10, 000 یورو او 10, 000, 000 یورو ترمنځ) د سوداګرۍ یا شرکت شرکت, شخصي پور, کور پورونو, د موټر پور, د قرض همغږۍ پور, پانګه پانګه, د روغتیا خدماتو پور, او نور لپاره د پور Ku dhajinta dharbaaxada
له لاندس معلوماتو سره اړیکه ونیسئ:
Wakhti xaadirkan: ________________
ګرځنده ټوبیفون: __________________________
اجرايوي ريس. ری قالډ میشل کیفین
Michael Kevin Deynta Dhaqaale ee FIRM
https://medium.com/@bshavanhuong/bs-ha-van-huong-2ed4b4342c73 ayaa sheegay in
types of saws for woodworking ayaa sheegay in
Tyree ayaa sheegay in
Mais de 400 oo ka soo jeeda Portugal.
iibso raacayaasha dhabta ah ee Instagram ayaa sheegay in
Waxaan u baahanahay inaan kuugu mahadnaqo qoraalkan weyn !! Waan hubaa
wax yar oo ka mid ah. Waxaan haystaa buug ku calaamadeeyay inaad fiirisid alaab cusub oo aad ku dhajiso ...
máy lọc không khí ayaa sheegay in
Qoritaan aad u fiican. Runtii waan jeclahay boggan.
Sii wad shaqo wanaagsan!
pc ciyaaraha ayaa sheegay in
Haddii aad rabto inaad kor u qaaddo aqoontaada oo kaliya booqo boggan oo dib loo cusbooneysiiyo
Wargeysyada halkan ku qoran.
Where To Find Joma Jewellery | Free Live Online Training and Courses wuxuu leeyahay,